I-China Springworks iya kongeza i-500,000 yeenyawo ezikwere zefektri eluhlaza yezolimo mveliso kunye nabathengisi | UAixiang
I-Lisbon, Maine-I-Springworks, eyona fama inkulu kunye neyokuqala eqinisekisiweyo ye-organic anhydrous e-New England, namhlanje ibhengeze izicwangciso zokongeza i-500,000 yeenyawo zeenyawo zendawo yokugcina izityalo.
Ulwandiso olukhulu luzakuqhubeka nokusebenzela abathengi abakhulu beeFama zaseMaine, iSuphamakethi yokuTya konke kunye neHannaford Supermarket, kunye neeresityu ezininzi zasekuhlaleni, iivenkile nezinye iivenkile. Ezi mveliso ziya kubonelela ngeNtwasahlobo ngelettuce eqinisekisiweyo entsha.
Indawo yokuqala yokugcina izityalo ekwi-40,000 yesikwere iya kusetyenziswa ngoMeyi ka-2021, eya kuthi iphindaphinde kathathu imveliso yonyaka ye-Bibb, i-lettuce yamaRoma, iletisi, isaladi yokunxiba kunye nezinye iimveliso, kunye namawaka eepawundi ze-tilapia. , Ebaluleke kakhulu kwinkqubo yokukhula kweNtwasahlobo ye-aquaponics.
Umseki we-Springworks, u-Trevor Kenkel oneminyaka engama-26 ubudala, waseka le fama ngo-2014 eneminyaka eli-19, kwaye ubeka uninzi lokukhula kwanamhlanje kukonyusa ii-odolo kwiivenkile ezinkulu ukuphendula i-COVID-19.
Ubhubhane ubangele umonakalo omkhulu kwiivenkile zokutya kunye nabathengi abazixhasayo. Ulibaziseko lokuthumela ngenqanawe kubanikezeli ngeenkonzo zonxweme oluseNtshona banyanzela abathengi bevenkile ezinkulu ukuba bajonge kwimithombo yendawo kunye neyommandla ngokutya okukhuselekileyo, okunesondlo kunye nokuzinzileyo. E-Springworks, indlela yethu ye-ecosystem-centric ibonelela ngeenkonzo kuzo zonke iinkalo. Le ndlela isebenzisa amanzi angama-90% ngaphantsi kwezinye iindlela, ayisebenzisi i-synthetic pesticides, kwaye iyasivumela ukuba sivelise imifuno eluhlaza, emitsha eluhlaza unyaka wonke. Nentlanzi. "Utshilo uKenkel.
Xa ubhubhane wathandwa ngo-2020, i-Whole Foods yathenga ii-Springworks ukugcina / ukugcina izinto eziselufini kwimveliso yeletisi ukuhlangabezana nemfuno enkulu yelettuce evela kubathengi eMantla mpuma. Iivenkile ezininzi ziye zafumana ukungazinzi kwabanikezeli ngeenkonzo zonxweme oluseNtshona ngenxa yokulibaziseka kokuthumela ngenqanawa kunye neminye imiba yokuhanjiswa kunye nokuhanjiswa.
UHannaford wandise ukuhanjiswa kwelethisi ye-Springworks esuka eNew England ukuya kwiivenkile kwindawo yaseNew York. UHannaford waqala ukuhambisa i-lettuce ye-Springworks kwiivenkile ezimbalwa eMaine ngo-2017, xa ikhonkco lalikhangela indawo yeetesi yaseCalifornia, Arizona naseMexico.
Kwiminyaka emibini, inkonzo ye-Springworks kunye nomgangatho uphefumle uHannaford ukuba andise ukuhanjiswa kwawo kuzo zonke iivenkile eMaine. Ngapha koko, xa ubhubhane wesifo somkhuhlane kunye nemfuno yabathengi inyuka, uHannaford wongeze i-Springworks kwivenkile yayo yaseNew York.
U-Mark Jewell, umphathi wecandelo lemveliso yezolimo kwa-Hannaford, uthe: “I-Springworks iza kujonga ngononophelo ibhokisi nganye xa sihlangabezana neemfuno zethu ze lettuce kunye nokufezekisa inkunkuma yokutya. Ukuqala ngendlela yentlanzi kunye nemifuno, siza kukhula siluhlaza, sivelise ukutya okutsha. " Ezi zinto, zidibene neendlela zabo ezikhuselekileyo zokhuselo lokutya, ukufumaneka unyaka wonke kunye nokusondela kwiziko lethu lokuhambisa, kusenze sakhetha i-Springworks Endaweni yokukhetha iimveliso ezilinywa emhlabeni ezithunyelwa kwilizwe liphela, kuya kuba lula. "
Ukongeza kwiimveliso ezibandakanya i-Springworks ye-Organic Baby Green Green Romaine lettuce, uHannaford uphinde wafaka i-lettuce yamagqabi eluhlaza eluhlaza kunye ne-Springworks brand, enokuvelisa inani elifanelekileyo le-lettuce ye-crispy yesaladi enye okanye i-smoothie.
UKenkel kunye nodadewabo usekela kamongameli uSierra Kenkel bebekhona ukusukela ekuqaleni. Ebesenza uphando kwaye ephuhlisa iintlobo ezintsha eziya kuthi zihlangabezane neemfuno zeshishini zabathengisi kwaye zihlangabezane nendlela yokuphila kunye neemfuno zesondlo zabathengi.
"Abathengi abaxabise umgangatho nokusekuhleni babuza iivenkile ezinkulu zeemveliso zezinto eziphilayo kubavelisi bokutya balapha," utshilo uSierra, ophethe intengiso nentengiso yaseSpropworks.
"Ukusuka kwimbewu ukuya kwintengiso, sisebenza nzima ukubonelela ngelethisi emitsha neyona imnandi egcina izinto ezinje ngokutya okuPheleleyo kunye neHannaford, kunye noko kufanelekileyo kubathengi babo. Sijonge phambili kwincoko kunye nezinye iivenkile ezinkulu kwivenkile eseMpuma kuba thina i-greenhouse entsha iza kuphucula amandla ethu okulima i-lettuce enencasa, enesondlo, eqinisekisiweyo-kunye namalungelo unyaka wonke wokusebenzisa imifuno eluhlaza kunye nemifuno kwixa elizayo. eMaine. "
I-Springworks yasekwa ngo-2014 ngu-CEO u-Trevor Kenkel xa wayeneminyaka eli-19 kuphela ubudala. Wayengumlimi okhulisa izityalo ngokuhlaza okomileyo e-Lisbon, eMaine, evelisa i-lettuce eqinisekisiweyo kunye ne-tilapia unyaka wonke. Intlanzi-imifuno i-symbiosis luhlobo lwezolimo olukhuthaza ubudlelwane bendalo phakathi kwezityalo nentlanzi. Xa kuthelekiswa nezolimo ezisekwe kumhlaba, i-Springworks hydroponic system isebenzisa ama-90-95% amanzi angaphantsi, kwaye inkqubo yokuthengisa yenkampani inesivuno ngehektare nganye ephindwe ka-20 kunaleyo yeefama zemveli.
Intlanzi kunye nemifuno yenkqubo yokuzalela apho iintlanzi nezityalo zixhasa ukukhula kwenye kwinkqubo evaliweyo. Amanzi atyebileyo atyebileyo afunyanwa kulimo lweentlanzi afakwa empompweni kwibhedi yokukhula ukondla izityalo. Ezi zityalo zona zihlambulula amanzi zize emva koko ziwabuyisele kwintlanzi. Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo (kubandakanya i-hydroponics), akukho khemikhali zifunekayo. Ngaphandle kwezibonelelo ezininzi ze-hydroponics, zimbalwa iindawo zokugcina izinto zokugcina izinto e-United States.